आर्कटिकमा पिल्मिंग फ्रेमास्टनले मिथेन निकालिरहेको छ! | नेटवर्क मौसम विज्ञान
केही दिन अघि report वैज्ञानिक रिपोर्ट »((२०१ number को लेख संख्या75828२2017 हो) मा प्रकाशित भएको एक वैज्ञानिक रिपोर्टले खतरनाक निष्कर्ष भन्दा बढि बढावा दिन्छ। आर्कटिक बरफमा छुटेको मिथेन विच्छेदक permafrost बाट जारी भइरहेको छ। यस घटनाको गहनतालाई बुझ्नको लागि हामीले सर्वप्रथम हामीले यो कुरा मनमा राख्नुपर्दछ कि तिनीहरू बरफमा फ्याँकेका मिथेन ग्यासको थैली हुन् जुन एक पटक डिफ्रस्ट भयो भने स्थायी रूपमा डिफ्रोज हुन्छ। मीथेन ग्यास को रिहाई को एक धेरै शक्तिशाली हरितगृह प्रभाव छ। यो २०/20० गुणा बढी शक्तिशाली र कार्बन डाइअक्साइडको सन्दर्भमा नकरात्मक हो।
अध्ययनको तथ्या .्कका अनुसार, मिथेन ग्यास यस ग्रहमा तापक्रम बढेको तेस्रो कारण हो। यहाँ समस्या त्यो मिथेनको उदारीकरणमा पर्दछ जुन जालमा फसेको थियो र बरफको मुनि जम्मा भएको थियो जुन अहिले रिलीज भइरहेको छ। डिसकन्टिनियस पर्माफ्रोस्ट, जुन अधिक भर्खरको र फ्रिज गरिएका तहहरूबाट फरक हुनका लागि नामाकरण गरिएको छ, प्लेइस्टोसेनमा गठन गरिएको थियो। यसमा पर्ने प्रभाव यसको प्रतिक्रिया प्रभावका कारण उच्च हुनेछ। जारी गरिएको मिथेन ग्यासले तापक्रम बढाउँदछ, जसले पग्लन बढाउँछ, जसले मेथेन ग्यासको रिहाइ बढाउँदछ जुन क्षेत्रहरू फेरि स्थिर हुँदैन ... आदिबाट।
1 अध्ययन कसरी महसुस भयो?
2 अध्ययनबाट कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ?
2.1 Permafrost पातलो
2.2 समान अवस्थाको साथ अध्ययन गरिएको बाहेक त्यहाँ अन्य क्षेत्रहरू छन्
2.3 प्रतिक्रिया प्रभाव
अध्ययन कसरी महसुस भयो?
यो अध्ययन, जुन १,13.000,००० किलोमिटर म्याकेन्जाइन डेल्टामा गरिएको थियो। यो दोस्रो आर्कटिक डेल्टा हो। अध्ययन गरिएको क्षेत्र पश्चिमबाट पूर्वमा 2२० किलोमिटर र उत्तरबाट दक्षिणमा २ 320० किलोमिटर थियो। पोलार्ड We अन्तरिक्ष यानमा अल्फ्रेड वेजनर हेल्महोल्ट्ज इन्सिट्यूट, पोलर साइन्सेस र मारिबास केन्द्रको केन्द्रबाट मापन लिइएको थियो। यद्यपि अध्ययन भर्खरै प्रकाशित भएको छ, यो अध्ययन विमानमा चलेको अवधि २०१२ र २०१ between बीचको थियो। पहिलो वर्षको लागि कुल flight उडान दिन र flight 240 उडान मार्गहरू समावेश गर्दै, र flight उडान दिन प्लस 5० दोस्रो वर्ष मार्गहरू।
स्पेसक्राफ्ट मापन meter मिटर नाक टाउकोसहित गरिएको थियो, wind-होल प्रोब सहित including थ्री वायु भेक्टर मापन गर्नका लागि जुन विमानको अगाडि राखिएको थियो। नमूना हावा क्याबिनको माथिल्लो इनलेटबाट तानियो, र २०१२ मा केवल मिथेन ग्यासको एकाग्रता आरएमटी २०० मा विश्लेषण गरिएको थियो। २०१3मा, यो एक मिनी ग्यास, कार्बन डाइअक्साइड र पानी वाष्प दुवैको लागि एक द्रुत ग्रीनहाउस ग्यास विश्लेषक FGG5EP मा विश्लेषण गरिएको थियो।
अध्ययनबाट कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ?
यो अध्ययन क्यानाडाको म्याकेन्जी डेल्टाको विच्छेदक पर्माफ्रोस्टमा गरिएको थियो। अनुभवी भईरहेको बलियो मीथेन ग्यास उत्सर्जन १०००km10.000 मा नाप्यो। Permafrost एक ठूलो आइस पानाको रूपमा काम देखाईयो कि खनिज र जीवाश्म संसाधनहरू भण्डारण गर्दछ।
सबैभन्दा पहिले, तापक्रमको मौसममा पातलो पातलो पार्ने परिणामले मात्र बायोजेनिक मीथेन ग्यास उत्सर्जन बढ्न सक्छ। तर भूगर्भीय मिथेन ग्यासको उत्सर्जनमा पनि, जुन हाल निरन्तर र बाक्लो पेमाफ्रोस्टको मुनि पसेको छ। नयाँ उत्सर्जन मार्गहरू permafrost विगलनको कारणले खुल्छ।
अलास्कामा पमेराफ्रोस्ट। फोटो नासा द्वारा प्रदान गरिएको
समान अवस्थाको साथ अध्ययन गरिएको बाहेक त्यहाँ अन्य क्षेत्रहरू छन्
दोस्रो, प्राकृतिक ग्यास र तेल भण्डारन भएका अन्य आर्कटिक क्षेत्रहरू, जुन हालको पेमाफ्रोस्टद्वारा खाली गरिएको छ, भविष्यमा मिथेन ग्यास उत्सर्जनलाई सम्बोधन गर्दा समावेश गर्न सकिन्छ, यदि स्थायी परमाफ्रोस्ट पग्लन जारी रह्यो भने।
तेस्रो, वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेको नतीजाले मिथेन ग्यासको भूगर्भीय उत्सर्जनले प्रतिक्रिया प्रभावमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ भनेर संकेत गर्दछ। Permafrost - कार्बन-जलवायु (अधिक प्राविधिक)। विशेष गरी permafrost क्षेत्रहरूमा पग्लनको लागि जोखिममा छ र त्यसैले अधिक ध्यान पाउन योग्य छ।
ग्लोबल वार्मिंगले निम्त्याउने विध्वंस सबै देशहरूमा झन् झन् स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ। प्रश्न यो हो कि यो केवल सीओ २ उत्सर्जन घटाउनको लागि पर्याप्त हुनेछ, वा यसको बारेमा अझ धेरै गर्नु पर्नेछ। प्रवेश गरिरहेको छ कि दुष्कर्म, यो जस्तो लाग्छ कि यो जस्तै रोकिने छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » आर्कटिकमा पिघलने पमेराफ्रस्टले मेथेन निकालिरहेको छ!
पेरिस सम्झौताको पालनाले एल निनो घटनालाई रोक्न सक्दैन